🥇 ▷ Dib-u-dejinta warshadda iyo Hard Reset Moto G2 ✅
Dib-u-dejinta warshadda iyo Hard Reset Moto G2
Telefoonnada Motorola ayaa si aad ah loo raadinayay sanadihii ugu dambeeyay. Iyagu wax yar ayey horumar sameynayeen Lenovo gacanta gacantiisa si xun ugama aysan gaarin. Kala duwanaanshaha Moto G wuxuu ahaa mid soo jiidasho leh G2-ga dhexe xitaa waa la sii wadayaa in la isticmaalo. Laakiin dhibaatooyinka jira awgeed, ‘Res Reset Moto G2’ waa lagama maarmaan. Maanta waxaan ku baraynaa sida loo sameeyo hab fudud si aad u xalin karto dhibaato kasta ee mobilada.
Kiisaska ay lagama maarmaan u tahay in laga soo celiyo warshadda
Ilaa maanta, afar sano kadib markii la bilaabay, Moto G2-da ayaa weli ah mid faa iido leh. Xaqiiqdii, waa ikhtiyaar aad u wanaagsan maxaa yeelay Thanksgiving-ka awoodeeda kala duwan ayaa ilaa maanta ansax ah; Si kastaba ha noqotee, waa waqtigii aad adeegsan laheyd inaad si tartiib tartiib ah u bilaabi doonto inaad gaabiso.
La yaab ma leh, waxay ku dhacdaa koox kasta oo xaaladahaas waxaan rabnaa inay u sii waddo sidii bilowgii. Haddii kani yahay kiiskaaga, mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ayaa ah in lagu celiyo sidii ay uga soo baxday warshadda. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo waxaad sameyn kartaa Hard Reset Moto G2 waxaadna u isticmaali kartaa sidii mid cusub.
Qaabka toosan ee loo sameeyo ‘Hard Reset Moto G2’
Marka ugu horeysa, maskaxda ku hay in ka hor intaadan samayn Hard Reset ay tahay inaad samayso gurmad. Tan waxaa ugu wacan inta lagu gudajiro nidaamkaaga waad waayi kartaa qaddar kasta oo data ah oo aad kaydisay moobaylkaaga. Sidookale hadaad haysato kaarka SD kaarka, waa in laga saaraa inta howsha socoto, kaliya si looga hortago.
Kadib, si aad u bilowdo hawsha, u gudub menu Setember-ka menu oo dooro ikhtiyaarka dib-u-dejinta xogta warshadda. Hawsha ayaa bilaaban doonta taas oo qaadan karta dhowr ilbiriqsi dhamaadka aakhirana waxaan haysan doonnaa taleefanka gacantu sida cusub.
Qaabka Manual si loo sameeyo Dib-u-dejinta Hard
Kani waa ikhtiyaar aad u wax ku ool badan marka loo eego kii hore sababtoo ah ma leh meel ay ku dhacdo guuldarrooyinka. Waa waxoogaa murugsan, laakiin waxaa gebi ahaanba u qalma dhammaan wanaagga uu howshu u shaqeeyo.
Si aad u fuliso, dami qalabkaaga Moto G2. Hel Helidda Xaaladda Soo kabashada adigoo riixaya oo qabanaya badhanka awoodda iyo mugga isla waqti isku mid ah dhowr sekan. Xulo ikhtiyaarka Dib-u-dejinta Warshadda Xogta oo habka soo-celinta ayaa isla markiiba bilaaban doona.
Sidaad arki doontid maahan wax dhib badan haddii aad kaliya sameyn doonto Hard Reset Moto G2. Waxaan rajeyneynaa inay adiga kuu shaqeyn karto oo aad si buuxda uga faa’iideysaneyso awoodaha mobilada.